RASMI: Kooxda Bayern Munich oo dib ula saxiixatay xiddigeedii hore ee Douglas Costa, kaasoo ay kala soo wareegeen Juventus – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Fulham…(Red Devils oo dib u heleysa laba xiddig oo dhaawac kaga maqnaa)
RASMI: PSG oo shaacisay inay qandaraaska u cusbooneysiisay mid ka mid ah xidigaheeda ugu muhiimsan kooxda
RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Real Madrid oo laga helay Korona Fayras
Ter Stegen oo shaaciyey inuu seegi doono ciyaaraha Euro 2020… (Waa nuucee dhaawaca seejinaya Koobka qarammada Yurub?)
RASMI: Macallin Roberto Mancini oo qandaraaska u kordhiyey xulka qaranka Talyaaniga
RASMI: Liiska 26-ka xiddig ee xulka qaranka Croatia uga qeyb galaya ciyaaraha EURO 2020 oo la shaaciyey… (Kovacic iyo Modric oo hoggaaminaya)
RASMI: 26-ka xiddig ee xulka Belgium uga qeyb galaya ciyaaraha EURO 2020 oo la shaaciyey… (Hazard, De Bruyne iyo Lukaku oo hoggaaminaya)
Kooxaha Man Utd & Everton oo ku tartamaya inay Premier League dib ugu soo celiyaan xiddig hore uga ciyaari jiray horyaalkaas oo haatan ka xamaasha Spain
Kooxda Real Madrid oo 50 milyan oo euro kula soo saxiixan karta xiddigeedii hore oo haatan ka ciyaara Talyaaniga
RASMI: Safka xulka qaranka Argentina ee kulammada bisha Juun oo lasoo saaray…(& Xiddig muhiim ah oo si la yaab leh looga reebay)
RASMI: Kooxda Bayern Munich oo dib ula saxiixatay xiddigeedii hore ee Douglas Costa, kaasoo ay kala soo wareegeen Juventus
Haaruun October 5, 2020
(Munich) 05 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa dib ula soo saxiixatay xiddigeedii hore ee Douglas Costa, kaasoo ay maanta kala soo wareegeen Juventus.
Bayern Munich ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday la soo wareegeen ciyaaryahankoodii hore ee Douglas Costa oo ay qaab amaah ah uga soo qaateen Juventus.
Douglas Costa ayaa hal xilli ciyaareed oo amaah ah ku joogi doona garoonka Allianz Arena.
Waqtigii dahabiga ahaa ee uu ku soo qaatay Bayern Munich waxa uu kula guuleystay kooxdaas labo horyaalka Bundesliga Jarmalka ah, waxaana uu u dhaliyey 12 gool isagoo u sameeyey 18 caawin kaddib 70 kulan oo uu u saftay.
Costa ayaa markii uu ku biiray maanta kooxda Bayern Munich yiri: “Aad ayaa ugu faraxsanahay inaan awood inaan markale u ciyaaro kooxda Bayern, waqti wacan ayaan kusoo qaatay Munich oo guulo badan leh, waana hubaa inaan markale koobab ku guuleysan doono”
— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 5, 2020
RASMI: Choupo-Moting oo ku biiray Kooxda Bayern Munich...+ SAWIRRO
RASMI: Laacibkii khadka dhexe ee Arsenal, Matteo Guendouzi oo ku biiray Kooxda Hertha Berlin... + SAWIRRO